ဂျိုကာ: Viedo ကို Desktop မှာ Wallpaper အနေနဲ့ ထားကြည့်ရအောင် (with VLC )
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ....ခုမှအသစ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် လိုအပ်ချက်များစွာရှိနေပါသေးတယ် ..ကျတော်လည်း သိထားတာတွေကို ဆက်လက်ဝေမျှပေးပါမယ်
ကျတော့ရဲ့ နည်းပညာဆိုက်လေးကို လာလည်သူအပေါင်း ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေ
Viedo ကို Desktop မှာ Wallpaper အနေနဲ့ ထားကြည့်ရအောင် (with VLC )
မနေ့ က ထက်ဇော် (MMiTD ) နဲ့ အွန်းလိုင်းကနေ ချက်နေရင်း viedo file ကို desktop မှာ wallpaper အနေနဲ့သုံးလို့ ရတာသိလားဆိုပီး ပြောလာတယ်...ကျတော်ကလည်း မသိဘူးလို့ပြောတော့ ခု mmitd ဆိုဒ်ထဲမှာ အဲ့ဒီအကြောင်း post အသစ်လေးတင်နေတာတဲ့...တင်းပီးပီးခြင်း link ပေးတာနဲ့ဝင်ကြည့်လိုက်တာ သဘောကျသွားတယ်..အဲ့ဒါနဲ့ကျတော်လည်း ပြန်ရှယ်လိုက်တာပါ...ထက်ဇော်(MMiTD) ရဲ့ post အတိုင်း ပြန်တင်ပေးထားတာပါ.... အောက်မှာ ဖတ်ကြည့်ပီး စမ်းကြည့်ကြည့်ပါ..သဘောကျမှာပါ....နည်းပညာအသစ်တွေမျှဝေပေးတဲ့ ထက်ဇော် (MMiTD) ကိုလည်း အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
ကျွန်တော်တို့ နေ့ စဉ် မရှိအဖြစ် အမြဲတစ်စေ အသုံးပြုနေကြမြဲ ဖြစ်တဲ့ .. ကွန်ပျူတာ တွေ အတွက် ... ပုံသေ သတ်မှတ်ပေးထားသော Desktop Background ကြီးကို သုံးနေရတာ ပျင်းရိငြီးငွေနေ့ ပါပြီလားးး ??
အဲ့ဒါဆို .... ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် Video ခွေတစ်ခွေ (သို့ ) Music Video အစ ရှိတာတွေကို Desktop Background မှာ ထားပြီး ကွန်ပျူတာကို အသုံးပြုကြည့်ရအောင် .... ။
အဲ့လို အသုံးပြုနိုင်ဖို့ အတွက် ..ဘာမှ သိပ်အများကြီး လုပ်စရာ မလိုအပ်ပါဘူးး ။ ဒါပေမဲ့ ... သင် အသုံးပြုတဲ့ Windows ကတော့ .. Windows7ဖြစ်မှ ရပါမယ် ... ။ (အဲ့လို ပြောလိုက်လို့Windows XP အသုံးပြုနေတဲ့ သူတွေ စိတ်အနှောင့်အယှက် မဖြစ်ပါနဲ့ ... ။ သင်တို့ အတွက် သီးသန့် Player လေး တစ်ခုလည်း ရှိပါသေးတယ် ... ။ အဲ့ဒါကတော့ ... KM Player ပါ ။ အဆိုပါ ပိုစ့်လေးမှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ် ... ။ ) အဲ့နောက်မှာမှ ... သင့်မှာ
VLC Media Player လေး တစ်ခု ရှိဖို့ ပဲ လိုအပ်ပါတယ် ... ။
တကယ်လို့ VLC Player လေး မရှိဘူး ဆိုရင်တော့ .... VLC Media Player လေးကို အရင်ဆုံး ဒေါင်းလုပ် လုပ်လိုက်ပါ .... ။
Download VLC Player Now
Download လည်း လုပ်ပြီးသွားပြီ Install လည်း လုပ်ပြီး သွားပြီ ဆိုရင်တော့ .. VLC ကို Run လိုက်ပါ ... ။ ပြီးရင် အောက်မှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း တစ်ဆင့်ချင်းစီ လိုက်လုပ်ပေးသွားရုံပါပဲ ... ။
ပြီးရင် Video ဆိုတဲ့ Tab မှာ ... Output ဘေးက Drop Down Arrow လေး ကို နှိပ်ပြီး Diret X Video Output ဆိုတာလေးကို ရွေးပေးပြီး Save လိုက်ပါ ... ။
ှSave လုပ်ပြီးရင် VLC Media Player ကို ပိတ်လိုက်ပါ ... ။ ပြီးမှ ... မိမိ စိတ်ကြိုက် Video ဖိုင် တစ်ဖိုင်ကို VLC နဲ့ ဖွင့်လိုက်ပါ ... ။ ဖွင့်ပြီးတာနဲ့ Video Menu လေးမှာ Direct X Wallpaper ဆိုတာလေးကို အမှန်ခြစ်ပေးပါ ... ။
အဲ့လို အမှန်ခြစ်လိုက်တာနဲ့ .. aero theme သုံးထားတဲ့ သူတွေ အနေနဲ့ .. windows7basic theme ကို ချိန်းသွားပါလိမ့်မယ် ... ။ (ကိစ္စ တော့မရှိပါဘူးးး ။ VLC ပိတ်လိုက်ရင် သူ့ သူ theme ပြန် ပြောင်းပေးသွားပါလိမ့်မယ် ... ။ )
ကဲ .. အဲ့ဒါလေးတွေ အားလုံး ပြုလုပ်ပြီးပြီ ဆိုရင်တော့ ... သင့်ရဲ့ Desktop Background ကို ပြန်သွားလိုက်ပါ ... ။
VLC Media Player နဲ့ သင်ဖွင့်ထားခဲ့တဲ့ Video ဖိုင်လေးကို သင့်ရဲ့ Desktop ပေါ်မှာ ... တွေ့ ရပါလိမ့်မယ် ... ။ ( အဲ.. ဒါပေမဲ့ ... Desktop ပေါ်မှာ right click နှိပ်ပြီး Refresh တော့ မနှိပ်မိစေနဲ့ နော် ... ပြန်ပျောက်သွားလိမ့်မယ် ... ။ ဒါပေမဲ့ .. ကျန်တာတွေကိုတော့ .. ပုံမှန် အသုံးပြုနေကြ အတိုင်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ... ။ ) ပုံမှန် အတိုင်း ပြန်လည် အသုံးပြုချင်ရင်တော့ Desktop Background ကို ချိန်းလိုက်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ VLC ကို ပိတ်လိုက်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပြုလုပ်ပြီး ပုံမှန် အတိုင်းပြန်လည် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ ... ။
ကဲ .. အဲ့လောက် ဆိုရင်တော့ ... ပုံမှန် သမားရိုးကျ ပုံသေ သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ Desktop Background Wallpaper တွေကနေ ခွဲထွက်ပြီး မိမိ စိတ်ကြိုက် Video Background များဖြင့် ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုရင်း ကိုယ် ၊ စိတ် လန်းရွှင်စွာဖြင့် တစ်နေ့ တာ အတွက် လုပ်ငန်း ဆောင်တာများကို ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။
အားလုံး အဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ ... ။
Htet Zaw (MMiTD)
Posted by ဂျိုကာ at 11:35 PM
Betway Casino, Site Counter, Online casinos clickandbuy, Euro Grand Casino, Mt4
Android ဖုန်း နဲ့zawgyi
Android ဖုန်းတွေမှာ မြန်မာဖောင့် (ဇော်ဂျီ) သွင်းပုံသွင်းနည်းလေးကို သူငယ်ချင်းတွေမေးကြတာ များလို့post အဖြစ် တင်လိုက်တာပါ......ဘ...
ဇော်ဂျီ နဲ့window ပြဿနာ
ကျတော့သူငယ်ချင်းတချို့ နဲ့မိတ်ဆွေတချို့ က စက်မှာ ဇော်ဂျီဖောင့်ကိုသွင်းပီး မြန်မာလို မမြင်ရလို့.. မြင်ရပီးတော့ gtalk မှာ စာရိုက်လို့ မ...
Avira Antivirus ကို သဘောကျတဲ့လူတွေအတွက် Avira AntiVir Premium 2012 လေးတင်ပေးတာပါ.. Avira ကို ကျတော်ကိုယ်တိုင်လည်း လက်ရှိအသုံးပြုပါ...
gtalk smilie theme v3.0
MMITD ဆိုဒ်က အစ်ကို ကိုအေးလွင့် တင်ပေးထားတဲ့ gtalk အတွက် theme လေးပါ... window XP ရော window7နှစ်ခုလုံးအတွက် ပါပါတယ် ...ဒီကောင်လေးက ကို...
Animated wallpaper (2)
Animated Desktop Fruit Christmas Wallpaper
Viedo ကို Desktop မှာ Wallpaper အနေနဲ့ ထားကြည့်ရေ...
Internet Download Manager v6.07.14
Auto Hide IP v 5.1.7.2
လာလည်ခဲ့ရင် ခြေရာလေးတော့ ချန်ခဲ့ပါ သူငယ်ချင်း
ဂျိုကာ. Awesome Inc. theme. Powered by Blogger.